Nehemaya 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 O wee ruo na, ozugbo a kọọrọ Sanbalat+ na Tobaya+ na Gishem+ onye Arebia+ nakwa ndị iro anyị ndị ọzọ na ewughachiwo m mgbidi+ ahụ nakwa na ọ dịghị oghere ọ bụla a hapụrụ na ya (ọ bụ ezie na ruo n’oge ahụ etinyebeghị m ibo+ n’ọnụ ụzọ ámá dị iche iche),+ 2 Sanbalat na Gishem wee zitere m ozi ozugbo, sị: “Bịa ka anyị zukọta+ n’oge a kara aka n’obodo nta ndị dị na ndagwurugwu* Ono.”+ Ma ha nọ na-akpa nkata imerụ m ahụ́.+ 3 M wee zigara ha ndị ozi,+ sị: “Ọ bụ ọrụ dị ukwuu ka m na-arụ,+ ọ gaghị ekwe m omume ịgbadata. Gịnị mere m ga-eji hapụ ọrụ a bịakwute unu, ọrụ a ewee kwụsị?”+ 4 Otú ọ dị, ha ziteere m otu ozi ahụ ugboro anọ, m nọkwa na-aza ha otu ihe ahụ. 5 N’ikpeazụ, Sanbalat+ ziteere m onye na-ejere ya ozi, kwuo otu ihe ahụ nke ugboro ise ya, o jikwa akwụkwọ ozi a na-emechighị emechi. 6 Ihe e dere na ya bụ: “A nụwo ya n’etiti mba niile, Gishem+ na-ekwukwa ya, na gị na ndị Juu na-akpa nkata inupụ isi.+ Ọ bụ ya mere i ji na-ewu mgbidi ahụ; ị na-aghọkwara ha eze,+ dị ka ihe ndị a e kwuru si dị. 7 E nwekwara ọbụna ndị amụma ị họpụtaworo ịkpọsa banyere gị n’ime Jeruselem dum, sị, ‘Eze nọ na Juda!’ A ga-akọrọ eze ihe ndị dị otú a. Ya mere, bịa ka anyị gbaa izu.”+ 8 Otú ọ dị, m zigaara ya ozi, sị: “Ihe ndị a ị na-ekwu enweghị nke mere eme,+ kama ọ bụ n’obi gị ka i si na-echepụta ha.”+ 9 N’ihi na ha niile na-anwa imenye anyị egwu, sị: “Ha ga-enwe nkụda aka+ n’ọrụ ahụ, nke ga-eme ka a ghara ịrụcha ya.” Ma ugbu a, mee ka aka m dị ike.+ 10 Mụ onwe m banyere n’ụlọ Shemaya nwa Deleya nwa Mehetabel mgbe e mechibidoro ya ụzọ.+ O wee sị: “Ka anyị zukọta n’oge a kara aka+ n’ụlọ ezi Chineke, n’ime ụlọ nsọ,+ ka anyị mechiekwa ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ; n’ihi na ha ga-abịa igbu gị, ha ga-abịa ọbụna n’abalị+ igbu gị.” 11 Ma m sịrị: “Nwoke dị ka m ò kwesịrị ịgba ọsọ?+ Olee onye dị ka m nke ga-agbaba n’ụlọ nsọ ma ghara ịnwụ?+ Agaghị m abanye!” 12 M wee mee nchọpụta, ma, lee, ọ bụghị Chineke+ zitere ya, kama o buru+ amụma a imegide m dị ka Tobaya na Sanbalat+ goro ya ka o mee.+ 13 Ọ bụ ya mere e ji goo+ ya ka m wee tụọ ụjọ+ ma mee otú ahụ, ka m wee mehie,+ ka ha nwee ihe ha ga-eji nye m aha ọjọọ,+ iji kọchaa m.+ 14 Chineke m, biko, cheta+ Tobaya+ na Sanbalat, dị ka ihe onye nke ọ bụla mere si dị, chetakwa Noadaya onye amụma nwaanyị+ na ndị amụma ndị ọzọ, bụ́ ndị nọ na-anwa imenye m egwu. 15 N’ikpeazụ, e wuchara mgbidi+ ahụ n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Ilọl, n’ime ụbọchị iri ise na abụọ. 16 O wee ruo na, ngwa ngwa ndị iro anyị niile+ nụrụ ya, mba niile gbara anyị gburugburu ahụkwa ya, ihere onwe ha mere ha ozugbo, ha amarakwa na ọ bụ Chineke+ mere ka a rụọ ọrụ a. 17 N’ụbọchị ndị ahụ kwa, ndị Juda a ma ama+ nọ na-ede ọtụtụ akwụkwọ ozi a na-ezigara Tobaya,+ ndị Tobaya dere ana-abịakwara ha. 18 N’ihi na ọtụtụ ndị nọ na Juda ṅụụrụ ya iyi, n’ihi na ọ bụ ya lụrụ nwa Shekanaya nwa Era;+ Jehohenan nwa ya lụkwara nwa Meshọlam+ nwa Berekaya. 19 Ha nọkwa na-ekwu ihe ọma banyere ya ná ntị m.+ Ha na-agwakwa ya ihe m kwuru. E nwere akwụkwọ ozi ndị Tobaya zitere imenye m egwu.+